.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Adobe Photoshop CS6 (Portable)
Flash Song ၀ါသနာရှင်တွေအတွက် ပုံ ဖြတ်တဲ့အခါ Photoshop ဆော့ဝဲကမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ ခု တင်ပေးလိုက်တဲ့
Software လေးက ပုံဖြတ်ယူတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ လိုချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ
Download: Adobe Photoshop CS6 (Portable)
Softwareလေးကို နေမင်းခေတ် နည်းပညာဘလော့လေးမှဒေါင်းယူပြီး ပြန်လည် Upload တင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ ဒီ Software လေးကို Upload ပြန်တင်ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်း မိုးကဗျာကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။